☀️ INook enelanga - I-Airbnb
☀️ INook enelanga
Ngena kwimbali yale ndawo ikhethekileyo nekhumbulekayo. Igumbi elinelanga, kunye negumbi elinesitayile elinokonwaba elilala 4. Ibekwe ngokufanelekileyo kwiDolophu yaseMbali eNew Bern. Iinkcukacha zezakhiwo zibonisa uthando lomninimzi kwizinto zakudala kunye nomtsalane. Umsebenzi wobugcisa owahlukileyo kunye nesimbo sasekhaya siboniswa kulo lonke eli khaya lihle.
Le ndawo yenye ye-3 yokulala kwikhaya lembali. Indawo ekwabelwana ngayo yigumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, igumbi lokutyela kunye nekhitshi. Kukho i-veranda ejingi ngaphambili, i-grill yangaphandle, umgodi womlilo, ifenitshala yeyadi, kunye nocingo olukhulu olubiyelweyo ngasemva kweyadi. Zonke ezi ndawo zivulelekile ukuba zisetyenziswe zizo zonke iindwendwe. Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo ngezinto ezininzi kwaye ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe, kubandakanya i-dishwasher kunye nesitovu / i-oveni. Iwasha epheleleyo kunye nesomisi ziyafumaneka ukuze zisetyenziswe kunye nesepha yondwendwe kunye nesithambisi selaphu.
Riverside Historical New Bern-ukuhamba umgama ukusuka edolophini.
Ndiyakuthanda ukubulisa iindwendwe zam xa ndifika. Ndihlala kwigumbi eliphezulu kwaye ndihlala ndifumaneka kuwe iiyure ezingama-24 ngosuku.
Okoko ndingekho kusapho okanye nabahlobo. Ukuba ufuna nantoni na zive ukhululekile ukubuza okanye ukubhala. Inombolo yeselula yam ifakwe kwiplakhu kwigumbi lam ngalinye.
Okoko ndingekho kusapho okanye naba…